Uphahla olupholileyo apt. kunye neterrace enelanga emangalisayo
Le ndlu imangalisayo yophahla ibekwe kumgangatho we-5 wesakhiwo esineeyunithi ezininzi, ekwenza ukuba uzive kwaye ube namava okwenyani ukubetha kwehart yengingqi yaseKarst njengoko besenza abantu balapha. Apt. ibekwe kwindawo ezolileyo yaseSežana, ukuze uphumle kwaye ukonwabele isiselo sakho kwithambeka elinelanga elinombono wehlathi elikude okanye izakhiwo ezingqongileyo.
Relax kwaye utshaje kwakhona iibhetri zakho kwigumbi langoku, elicocekileyo nelikhuselekileyo elimiswe kwisakhiwo esilondolozwe kakuhle. Kwaye ewe, sine-elevator! :)
I-Apartment ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye isiqinisekiso sokuhlala kwakho okumnandi eSežana. :) Indawo yayo sisiqinisekiso sokuba unokuhlola kwaye ujabulele kwiindawo ezininzi zokutyelela ezikufutshane, njengePostojna emiqolombeni, emiqolombeni yaseŠkocjan, kwifama yeLipica stud, Trieste, ... njl njl. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide yolwandle iSlovenia iyafikeleleka kwimizuzu engama-30 yokuqhuba imoto, ke le ndlu inokuba sisiqalo esifanelekileyo sohambo lwakho.
ISežana ineendawo ezininzi ezinomtsalane. Igadi yezityalo eVilla Mirasasso kunye nokungcamla iwayini kweyona wayini inkulu, iTeran PTP kwindawo yokuthengisa iwayini yaseVinakras, ayinakulibaleka. Endleleni eya kwiFama yeLipica Stud unokujonga umfanekiso wembongi uSrečko Kosovel phambi kwendlu apho wazalelwa khona kwaye undwendwele imyuziyam yayo encinci. Yonwabele ukukhwela ibhayisekile ukuya kwi-stud ifama i-Lipica okanye uhambe nge-Karst Living Museum, i-microcosm yendawo kunye noxinzelelo lweempawu zekarst.
Xa ndingekho emsebenzini, ndingakuvuyela ukukunceda. Ukuba ufuna naliphi na icebiso okanye eminye imiyalelo eyongezelelekileyo malunga nento omawuyindwendwele, indawo omawuye kuyo (njl.), into omawuyiphonononge, nceda uzive ukhululekile ukuqhakamshelana nam nangaliphi na ixesha.
Xa ndingekho emsebenzini, ndingakuvuyela ukukunceda. Ukuba ufuna naliphi na icebiso okanye eminye imiyalelo eyongezelelekileyo malunga nento omawuyindwendwele, indawo omawuye kuyo…